China 65 Steel Frame Formwork ifektri nabahlinzeki |I-Lianggong
65 Uhlaka Lwensimbi
65 Isakhiwo sodonga lwensimbi luwuhlelo oluhlelekile nolwendawo yonke.Uphaphe olujwayelekile okuyisisindo esilula kanye nomthamo omkhulu womthwalo.Ngesigxivizo esiyingqayizivele njengezixhumi zazo zonke izinhlanganisela, imisebenzi yokubumba engelula, izikhathi zokuvala ngokushesha nokusebenza kahle okuphezulu kufinyelelwa ngempumelelo.
Lokhu kuwuhlaka lwesistimu ye-formwork ye-modular
Yakhiwe yiphaneli ye-Formwrok kanye Nezesekeli.
Iphaneli Yokusebenza: Uhlaka lwensimbi olufakwe i-plywood engu-15mm
Uhlaka lwensimbi: Q235B (GB/T700-2007)
I-Plywood: Ukhuni oluqinile lwekhwalithi ephezulu noma ifilimu ye-Eucalyptus ebhekene ne-plywood yokwakha eno-15mm.
Ukucindezela kukakhonkolo okuvunyelwe: 90 kN/㎡
Ibanga lokulungisa imbobo ngu-50mm.Kungukukhuphuka okuncane kokulungisa.
Vala izimbobo ezingasetshenzisiwe eshidini le-formwork lamaphaneli e-Universal ngamapulaki angu-R 20.
Umklamo wethu nokhoI-SIMPLE IMNANDI KAHLE,Iphaneli yefomula yefomu engu-9 evamile kuphela: 3000x1200;3000x950;3000x600;1200x1200;1200x950;1200x600;
Isaziso: I ubuningi ukusebenza ububanzi of eyodwa ongashadile iphaneli kufanele be Ngaphansi 150mm kuna panel ububanzi.
Iphaneli ingahlanganiswa kunoma yikuphi ubude nobubanzi ukuze ivumelane nesidingo sangempela endaweni yomsebenzi.
Indlela yokulungisa ubukhulu bekholomu: (Isigaba sekholomu)
I-coupler yekholomu isetshenziselwa ukuxhuma okuqondile kwamaphaneli amabili e-formwork, yakhiwe i-lock catch kanye ne-disk nut.
Ukusetshenziswa: Faka induku yokubamba yokukhiya emgodini wokulungisa,
Shintsha indawo ye-coupler yekholomu ngokulungisa imbobo, bese indawo ezungezayo yamaphaneli angu-4 izoshintshwa ubukhulu.Ukuze ifaneleke izinhlelo zokusebenza zekholomu yesigaba esihlukene.
I-clamp evamile isetshenziselwa ukuxhuma iphaneli ye-formwork two ukwandisa indawo ye-formwork nobude.Ayisetshenziselwa kuphela ukuxhuma iphaneli ye-formwork, kodwa futhi isetshenziselwe isitebhisi sokuxhuma, i-caster, isilawuli se-rebar, lena i-multifunction design, ukuze kube lula kusayithi lomsebenzi.
3. Ukuqondanisa coupler
I-coupler yokuqondanisa isetshenziselwaxhuma iphaneli ye-formwork emibili, kodwa futhi inomsebenzi ohambisanayo.Ukuqiniswa kwe-clamp evamile ekuxhumekeni.
Ukukhiya nokuqaqa isando sokusebenzisa lezi zesekeli kwanele.Thuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi, wenze lula ukusebenza.
4. Isitebhisi & Inkundla Yomsebenzi
Ukusebenza ukufinyelela ukugadwa ukhonkolo ukuthela, isici kanje:
Sebenzisa ipayipi elivamile lensimbi njenge-handrail esikhundleni somklamo owenziwe ngokukhethekile.Sebenzisa ngokugcwele izinto zokwakha endaweni yomsebenzi.
Sebenzisa i-fasten clamp efanayo (i-C-clamp) ku-handrail nepulangwe lensimbi, i-multifunction design.
Sebenzisa imodi yokuxhumana efanayo kuphaneli yefomu kanye nesitebhisi (nge-clamp ejwayelekile).Vumela iladi lingasukuma futhi lihambe ngokushesha.
Umdwebo weplathifomu yomsebenzi:
3-1 : Okujwayelekile
3-2 : Ipulangwe Lensimbi
3-3 : C-Clamp
I-handrail isebenzisa ipayipi elivamile lensimbi.
Umthwalo wesevisi ovunyelwe: 1.5 kN/㎡ (150kg/㎡)
Layisha Ikilasi 2 ku-EN 12811-1:2003
5. Isethi yamasondo (Caster)
Ukusebenzisa ama-bolts noma i-clamp ukuxhuma kuphaneli ye-formowrk, ukusonta isibambo, ungakwazi ukuphakamisa i-formwork suite, kulula ukuyihambisa, nakuba i-formwork inzima kakhulu, abantu abangu-1 noma ababili bangayihambisa kalula, ukusuka endaweni eyodwa yomsebenzi ukuya kwesinye ngokushesha futhi iyaguquguquka, ayidingi ukusetha ifomu lekholomu ngayinye, okwamanje, yehlisa izindleko zokusebenzisa i-crane.Ngoba ingasuswa kalula, isethi eyodwa ingabiwa kwabaningi be-formwork suite, yonga izindleko.
Ukuze ugcine i-formwork suite izinzile, ukuphepha nokusebenzisa kalula, yaklanywa uhlobo olu-2.Ngokuvamile sebenzisa uhlobo olu-2 lwe-rib-connect kanye nohlobo lokuxhuma ohlangothini olu-1 ku-half column formwork suite.
Xhuma nge-Standard clamp
Nikeza indawo yokuphakamisa yephaneli ye-formwork.Xhuma kubambo lwe-formwork panel ngebhawudi.
Isetshenziselwa ukuvikela indawo ye-rebar ukuvimbela ukususwa.Sebenzisa iphrofayela enomumo ofanayo nohlaka lwe-formwork, ukuxhuma kalula nokuqaqa nge-clamp evamile.
Ukulinganisa i-formwork gcina futhi ulungise i-engeli yokuma.
Xhuma i-formwork ngebhawodi futhi ugxile ezimbanjeni.Esinye isiphetho simiswe endaweni eqinile kakhonkolo ngebhawodi lehange.
Esinye isifunda sinemithetho yokuphepha ekhoneni lezingxenye zokwakha, ayikwazi ukuvela ama-engeli abukhali.
Indlela yendabuko iwukusebenzisa ingxenye engunxantathu yokhuni ukubethela emaphethelweni e-formwork.
Lo mdwebo we-chamfer ungafakwa ohlangothini lwephaneli ye-formwork, akudingeki ukuthi ulungise izipikili.
1. Ngaphakathi ikhonaIkhona elithambile livumela i-formowrk ukuthi ihlakazeke kalula ngamandla anele.
2. Alikho khona langaphandle umklamoIkhona langaphandle alidingekile, kungani sidinga izesekeli ezengeziwe lapho sinomklamo omuhle we-coupler?
3. Kushiwo IkhonaNgokufanayo namahinge, vumela noma yikuphi ukwakheka kwe-engeli okuhlukile kungenzeka.
4. Gcwalisa impahla isixhumi
5. Gcwalisa qinisaLungisa igebe elincane ngezinto zokugcwalisa ngokushesha.Ububanzi: 0 ~ 200mm
6.I-Waler clampQondanisa wonke amaphaneli lapho ukuphakamisa okubalulekile nokumiswa.
7. Uhlangothi olulodwa umsekeliIfomu B lodonga oluhlangothini olulodwa olufika ku-6m
Kulula, kulula futhi kuphephile ukuxhuma umsekeli nge-formwork panel
Umhlangano we-Shear Wall
Mayelana nephaneli yangaphezulu:
Iphaneli engaphezulu yefomu le-B yi-plywood ebhekene nefilimu engu-12mm.Siyazi ukuthi impilo yesevisi yeplywood inomkhawulo, njengoba ngokuvamile, ingasetshenziswa izikhathi ezingaba ngu-50 kuhlaka lwefomu B.
Lokho kusho ukuthi udinga ukushintsha i-plywood entsha.Empeleni kulula kakhulu futhi kulula.Isinyathelo esi-2 kuphela: Rivet;Seal side
I-rivet eyimpumputhe (5*20)
I-rivet kufanele ibambelele ku-anchor plate.(Ipuleti elincane elingunxantathu kuhlaka)
Mayelana nosayizi wokusika:
Siyazi ukuthi ubukhulu beplywood obujwayelekile bungu-1220x2440mm (4' x 8')
Usayizi ojwayelekile wefomu le-B unobude obungu-3000mm.Singahlanganisa iphaneli engu-2.Uhlaka lwensimbi lulungiselelwe ubhontshisi
"i-anchor plate"(unxantathu omncane njengesithombe esingezansi).Vumela ukujoyina ku-rib tube.
Ngakho-ke, iphaneli ye-3m kufanele isikwe ngo-2388mm + 587mm
Enye iphaneli yefomu le-B yobukhulu ingasebenzisa i-plywood ebalulekile.
Usayizi weplywood kufanele ube mfushane ngo-23~25mm kunephaneli yefomu le-B
B-ifomu 1200mm----Plywood 1177mm
B-ifomu 950mm----Plywood 927mm
B-ifomu 600mm----Plywood 577mm
Okwedlule: I-Wing Nut
Olandelayo: 120 Uhlaka lwesakhiwo sensimbi